Nhau - Chitupa
KingTai Kambani iri yakazara yekutengesa inogadzira inosanganisa kugadzirwa uye sales.We tine yedu fekitori uye mhiri kwemakungwa timu yekutengesa, fekitori iri muHui Zhou Guta Guangdong Province.Since pakagadzwa, kambani yakawana zvinopfuura makumi matatu zvitifiketi uye patent zvinosanganisira Wal- Mart, Disney, Universal Studios, FDA uye ISO90001.
Harry Potter, Universal Studios uye Disney ndivo vatengi vatave tichishanda pamwe navo kubva pakagadzwa. Isu tinogara tichipa yakanakisa sevhisi kune vatengi maererano nehunhu uye nguva yekuendesa, inovawo nongedzo kambani yedu yanga ichishanda nesimba on.Panguva imwecheteyo, pataive tichishanda naWal-Mart takawana FDA chitupa muUnited States. .
Nezve iyo FDA, Takabatana naWal-Mart kuyera chipuni chigadzirwa uye takawana chitupa, saka chiyero chedu chipuni chigadzirwa chine chengetedzo garandi.You can buy with confidence.Tinogona kupa zvitupa zvereferensi yako kana uchizvida. chipunu, isu tine akawanda masitayera anogona kunge ari kusarudza, asi kana iwe uine muridzi wako dhizaini zvakanaka, pls ndiratidze yako dhizaini kana 3D mhedzisiro yatinogona yekureva, uye ndokupa iwe huwandu.
Zvekusimudzira kwenguva refu, ndapota tiudze kana musika wako uchida zvimwe zvitupa.Tichakupa iyo nguva yekuyedza zvinoenderana nezviri kudiwa nechigadzirwa, kuti tikwanise kuvhura musika wakakura.Tinogona kukupa chigadzirwa kuti uite bvunzo mushumo, panguva imwe chete, isu zvakare tine yekuongorora mushumo wevamwe vatengi kuti vagoverane newe kana uchida.Zvisinei, izvo zvigadzirwa zveakasiyana zvigadzirwa zvakasiyana, ndozvakaitawo mhedzisiro bvunzo. Mimwe mhinduro dzevatengi dzevatengi dzinogona chete kushandiswa sereferenzi tsika.Kufunga nezve kuvandudzwa kweprojekti, tinokurudzira kupa masampuli ebvunzo yako yekuyedza.Ndinovimba unonzwisisa.Kana iwe uine chero kubvunza kugamuchirwa kuti utibata nesu chero nguva.Takamirira zvako.